अन्तरवार्ता Archives - Page3of6- Daily State News
कुलमान भन्छन्ः लोडसेडिङ फर्किन्छ कि भन्ने शंका जायजै हो
‘काम पनि गर्न नदिने, लोडसेडिङ पनि हुनु नहुने ?’ १९ साउन, काठमाडौं । नेपाली जनतालाई अँध्यारोबाट निकालेको सबैभन्दा ठूलो जस पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि परीक्षामा छन् । आगामी हिँउदमा पनि लोडसेडिङ रोक्ने चुनौती उनका सामु छ । हिँउदमा फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने चर्चा बजारमा ब्याप्त छ । यसलाई रोक्न प्राधिकरणका तयारीहरु के-के […]
‘पहिलोचोटि पैसा नखाई बढुवा भएको छ’ १२ साउन, काठमाडौं । उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ हटाएर छवि राम्रो बनाएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा यतिबेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रहरीको बढुवामा असन्तुष्टि सतहमा आइरहेका बेला शर्माले उर्जामा कमाएको नाम गृहमा रहँदा बदनामीमा त परिणत हुँदैन ? यस्तो संशय जनमानसमा देखिन थालेको छ । साथै प्रहरी संगठनमा राम्रा कामहरु […]
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रको प्रश्न : तपाईंहरूको हात कहाँ बाँधिएको छ ?
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि देशका ६ प्रदेशका ६ सय १७ स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको हातमा गएको छ । अब प्रदेश नं. २ का १ सय २७ स्थानीय तहले मात्र जनप्रतिनिधि पाउन बाँकी छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ भने यतिबेला जनप्रतिनिधिहरू आफूले पाएको अधिकारअनुसार काम गर्ने अभ्यासमा छन् । त्यसका […]
सरकारले २०७१ माघ २२ गते गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगले उद्योगी/व्यवसायीलाई करमा दिएको छूटको विवाद अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो। चार्टड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा बनेको यो आयोगले ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको करको वक्यौता रकममा करदातासँग सम्झौता गर्दा साढे २० अर्ब रुपियाँ छूट दिने निर्णय गरेपछि विवादमा आएको हो। यो विवाद अहिले अदालत […]
'तीन दलका नेतालाई देशको माया छैन'
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतो स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । संविधान लेखनदेखि निरन्तर असहमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेको भए तापनि निकास निस्कन नसकेकामा चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन । प्रमुख तीन दल नै संविधान संशोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउने महतोले प्रतिपक्ष एमालेसँग वार्ता र छलफल चलाएर निकास निकाल्ने योजना सुनाएका छन्, उनै महतोसँग […]
विसं २०४२ मा नेपाल टेलिकम सेवा प्रवेश गरेकी हाल : टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी संस्थालाई लिडिङ रोलमा राख्न प्रतिबद्ध बताउँछिन् । गत आर्थिक वर्षमा २३ करोड राजस्व तिरेको नेपाल टेलिकम मोबाइल, फोन सेवा प्रदायक संस्थाहरूमध्येकै ठूलो संस्था हो । उनी खुशी र स्वस्थ देखिन्छिन् । आफू बिरामी भए टेलिकम स्वस्थ राख्न गाह्रो हुने उनको तर्क छ । […]
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भारतको तीनदिने भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्किनुभएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निमन्त्रणामा दिल्ली आएको भए पनि उपप्रधानमन्त्री महराले यो भ्रमणलाई कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा उपयोगसमेत गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालका लागि समर्थन माग्नु यो भ्रमणको दोस्रो एजेन्डा देखियो । त्यही भएर मन्त्री महराले दिल्ली आइपुगेलगत्तै नेपालसँग […]
नयाँशक्तिको संयोजक छाड्ने बाबुरामको इच्छा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग मोर्चा बनाऔं- देवेन्द्र
१९ असार, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् । सो पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले चाहिँ प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव लगायतसँग मोर्चा बनाएर एउटै चिह्नमा चुनावमा जानुपर्ने लाइन अघि सारेका छन् । के डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिपार्टीको जिम्मेवारी परित्याग गर्न […]
राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहिस्कार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको अवरोध उत्पन्न गर्ने योजनाबीच पनि दुवै चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो त ? हो, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन ती दुवै दलको सहयोग रह्यो । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । राजपाले केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दाराख्दै पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राजपाका माग […]